Sei maemail ese asingaonekwe muMail uye nekuigadzirisa sei | Ndinobva mac
Dzimwe nguva iyo Apple Mail app pane yako Mac inogona kuparara uye usatakure zvakanaka maemail ese awakachengeta. Muzviitiko izvi zvinowanzoitika ndezvekuti skrini kana kuti bhokisi retsamba harina chinhu nemairi kana matatu maemail kumusoro, kuzasi hakuna chinhu zvachose uye hakutakure iwo mameseji.
Vazhinji vashandisi vanogona kufunga kuti maemail haapo asi akarara. Izvi zvinowanzoitika neGmail, Hotmail account, nezvimwe. hazviwanzo kuitika kana iri yepamutemo Apple iCloud email account. Nhasi tichaona maitiro ekugadzirisa dambudziko iri nenzira yakapfava uye inokurumidza.
Isu tinongofanirwa kuwiriranisa tsamba zvakare
Izvo zvinogona kutaridzika sedambudziko rakakura mukuti haisi meseji dzese dzeemail dzatakachengeta muaccount yedu yeGmail dzinoonekwa, mukati meMessage application paMac yedu. Zviri nyore kwazvo kuti maemail ese adzokere muaccount yedu uye kune izvi isu tinongofanirazve kuenzanisa account.
Kuti tiite chiito ichi isu tinozozviisa isu chaiko pamusoro peaccount iri kukundikana isu tinodzvanya kurudyi bhatani kana tinya kaviri paTrackpad uye tinya chaiko pane sarudzo «Inzanisa». Iwe uchaona kuti otomatiki ese maemail awaive nawo uye asina kutakurwa akatakurwa zvakare, iwo anoonekwa sezvatinazvo iwo ekuzvarwa Gmail application kana desktop.
Kune vamwe vashandisi vakatibvunza isu chikonzero nei maemail aya achinyangarika kana kumira kuenderana otomatiki uye ndiko iko kunyorera Apple Mail ichine mamwe mabugs, zvichiri kunetsa kubata uye dzimwe nguva zvinogona kutakura maemail nenzira kwayo. Vamwe vashandisi vanofunga kushandisa mamwe mamaneja mamaneja asi ivo vanogara vachipedzisira vadzokera kuMail sezvazvakaitika kwandiri uye zvirokwazvo newewo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Sei maemail ese asingaonekwe muMail uye nekuigadzirisa sei